Mpanamboatra fonosana tilikambo Ceramic - Orinasa mpanamboatra fonosana seramika any Shina
Fonosana Tower Tower Ceramic Pall
Ceramic Pall Ring dia nohatsaraina tamin'ny peratra Raschig vita amin'ny keramika, ny Ring Ceramic Pall dia nanampy ny famohana ny lavaka mandritra ny herinandro maromaro, ity fananganana ity dia afaka manatsara ny velarana sy ny banga, ny Ceramic Pall Ring dia manome porosity mizara ary manatsara ny fizarana ny tsiranoka, fahaiza-manao lehibe kokoa ary fidinan'ny tsindry ambany noho ny peratra fitetezana keramika.
Ny Ceramic Intalox Saddle dia nohatsaraina avy amin'ny lasely arc ceramic, ny saddle intalox ceramic dia manova ny faritra arched ary mahatonga ny radius anatiny amin'ny curvature hafa, io fandresena io dia mandresy ny olana amin'ny akany amin'ny ankapobeny, ny saddle intalox Ceramic dia manome porosity zarao ary manatsara ny fizarana ny tsiranoka, fahaiza-manao lehibe kokoa ary fidinan'ny tsindry ambany noho ny peratra fitetezana keramika.
Famonosana Tower Tower Saddle Ceramic Super Intalox
Ny valizy Ceramic Super Intalox Saddle dia nohatsaraina avy amin'ny lasely Intalox keramika, ny lasely super intalox Ceramic dia manova ny faritra arched roa miaraka amina girara fanamboarana io afaka manatsara ny faritra amboniny sy ny voidage. Ny lasely super intalox amin'ny seramika dia manaparitaka porosity ary manatsara ny fizarana ny tsiranoka, ny fahafaha-manao bebe kokoa ary ny fihenan'ny tsindry ambany noho ny peratra fitetezana keramika.
Famonosan'ny Tower Raschig Ring amin'ny Ceramic
Ceramic Raschig Ring miaraka amin'ny fanoherana asidra tsara sy fanoherana ny hafanana. Azon'izy ireo atao ny manohitra ny harafesin'ny asidra tsy miharo isan-karazany, asidra biolojika ary solvents organika afa-tsy asidra hydrofluorika, ary azo ampiasaina amin'ny toetr'andro avo na ambany. Vokatr'izany dia malalaka be ny laharan'izy ireo. Ny Ceramic Intalox Saddle dia azo ampiasaina amin'ny tsanganana fanamainana, ny tsanganana mpitroka, ny tilikambo mangatsiaka, ny fikosehana tilikambo amin'ny indostrian'ny simika, ny indostrian'ny metaly, ny indostrian'ny entona arintany, ny indostria mpamokatra ôksizenina, sns.
Fonosan'ny Tower Tower
Carbon / Graphite raschig gel dia boribory misy fitaovana grafita sy savaivon'ny fanoherana mitovy amin'ny hafanana avo, asidra hydrofluorika ary asidra mahery, fonosana simika alkali mahery. Mampiasà maripana hatramin'ny 200 ℃ ambanin'ny 48% mifangaro ny asidra hydrofluorika, ny asidra azota, ny asidra solifara, ny potasiôma hidroksida, ny sodium hidroksida ny alkaly asidra indrindra ary ny sira, ny solvent solika dia manana fanoherana tsara harafesina. Izy io dia index index (indrindra ny tanjaka sy ny hamafin) nosedraina dia ambony noho ny famaritana mitovy amin'ny vokatra nafarana.
Famonosana Tower Tower
Ceramic Berl Ring dia nohatsaraina avy amin'ny lasely Intalox ceramic, ny keramika Berl Ring dia manova ny faritra arched roa dia afaka manatsara ny velaran'ny faritra sy ny banga, ny Ceramic Berl Ring dia manome porosity zaraina ary manatsara ny fizarana ny tsiranoka, ny fahafaha-manao bebe kokoa ary ny fihenan'ny tsindry ambany noho ny ceramic peratra
Famonosana Tower Mini Ring Cascade
Ceramic Cascade Mini Ring misy fanoherana asidra tsara sy fanoherana ny hafanana. Azon'izy ireo atao ny manohitra ny harafesin'ny asidra tsy miharo isan-karazany, asidra biolojika ary solvents organika afa-tsy asidra hydrofluorika, ary azo ampiasaina amin'ny toetr'andro avo na ambany. Vokatr'izany dia malalaka be ny laharan'izy ireo. Ceramic Cascade Mini Ring dia azo ampiasaina amin'ny tsanganana fanamainana, tsanganana mpitroka, tilikambo mangatsiaka, fikosehana tilikambo amin'ny indostrian'ny simika, indostrian'ny metalaly, indostria entona arintany, indostria mpamokatra ôksizenina, sns.
Famonosana Tower Tower an'ny karazana keramika Y
Keramika Y Type Partition peratra misy fanoherana asidra tena tsara sy fanoherana ny hafanana. Azon'izy ireo atao ny manohitra ny harafesin'ny asidra tsy miharo isan-karazany, asidra biolojika ary solvents organika afa-tsy asidra hydrofluorika, ary azo ampiasaina amin'ny toetr'andro avo na ambany. Vokatr'izany dia malalaka be ny laharan'izy ireo. Ny peratra fizarazaran-keramika Y dia azo ampiasaina amin'ny tsanganana fanamainana, ny tsanganana manintona, ny tilikambo mangatsiaka, ny fikosehana tilikambo amin'ny indostrian'ny simika, ny indostrian'ny metaly, ny indostrian'ny entona arintany, ny indostria mpamokatra ôksizenina, sns.
Famonosana Tower Tower Ring Ceramic
Ny Ceramic Cross Ring dia nohatsarain'ny peratra raschig vita amin'ny ceramic, miaraka amin'ny velarantany ambonimbony kokoa sy ny tanjaka compressive noho ny peratra raschig, miaraka amin'ny fanoherana asidra tsara sy fanoherana ny hafanana. Azon'izy ireo atao ny manohitra ny harafesin'ny asidra tsy miharo isan-karazany, asidra biolojika ary solvents organika afa-tsy asidra hydrofluorika, ary azo ampiasaina amin'ny toetr'andro avo na ambany. Vokatr'izany dia malalaka be ny laharan'izy ireo. Ny Ceramic Cross Ring dia azo ampiasaina amin'ny tsanganana fanamainana, ny tsanganana mpitroka, ny tilikambo mangatsiaka, ny fikosehana tilikambo amin'ny indostrian'ny simika, ny indostrian'ny metaly, ny indostrian'ny entona arintany, ny indostria mpamokatra ôksizenina, sns.
Famonosana tilikambo kely miendrika keramika kely
Keramika Mini Lessing Ring dia nohatsarain'ny peratra raschig vita amin'ny ceramic, miaraka amin'ny velarantany ambonimbony kokoa sy ny tanjaka compressive noho ny peratra raschig, miaraka amin'ny fanoherana asidra tsara sy fanoherana ny hafanana. Azon'izy ireo atao ny manohitra ny harafesin'ny asidra tsy miharo isan-karazany, asidra biolojika ary solvents organika afa-tsy asidra hydrofluorika, ary azo ampiasaina amin'ny toetr'andro avo na ambany. Vokatr'izany dia malalaka be ny laharan'izy ireo. Ceramic Mini Lessing Ring dia azo ampiasaina amin'ny tsanganana fanamainana, ny tsanganana mpitroka, ny tilikambo mangatsiaka, ny fikosehana tilikambo amin'ny indostrian'ny simika, ny indostrian'ny metalaly, ny indostrian'ny entona arintany, ny indostria mpamokatra oksizenina, toy ny tilikambo fonosana amin'ny fampiharana famindrana betsaka, toy ny fampitana hafanana ao amin'ny RTO, sns. Ireo vokatra rehetra ireo aorian'ny fanaovana kajy 24 ora, ny maripana sivana dia mihoatra ny 1000 ℃ dia vokatra inert.